ZoomInfo: Kurumidza Yako B2B Pipeline NeKambani Dhata seSevhisi (DaaS) | Martech Zone
Kana uchitengesera kumabhizinesi, unoziva kuoma kwazvakaita kuwana makambani angangove uye kutsvaga vanoita sarudzo ipapo… ndoda kunzwisisa chinangwa chavo chekutenga chaizvo. B2B sales superstars mamwe mashura anoshamisa, kufona mushure mekufona kune vemukati nekunze vanobatika vavaka hukama navo kuti vaone vanhu chaivo pamakambani chaiwo - panguva chaiyo.
ZoomInfo yakavaka inotungamira pasi rose Data seSevhisi (DaaS) chikuva chekutsigira yako yekuenda-kumusika zano chero iwe kana vatengi vako vari munyika. Zvavo firmographic database zvinosanganisira:
106 mamiriyoni emakambani marekodhi
167 miriyoni yekuonana marekodhi
140 miriyoni email kero
50 miriyoni dial manhamba
41 mamiriyoni enharembozha
31,000 matekinoroji akaiswa
Iri harizi rondedzero… anodarika 100 miriyoni marekodhi anovandudzwa zuva nezuva netiweki iri kukura yevapi vanozvipira inosimbisa kana kuwedzera ruzivo rutsva. Kudzidza muchina (ML) uye Natural Language Processing (NLP) anoisirwawo kutora data kubva kune anopfuura 38 miriyoni online masosi zuva nezuva - kusanganisira emakambani mawebhusaiti, zvinyorwa zvenhau, SEC filings, uye mabasa anotumirwa. Ivo zvakare vane vanopfuura mazana mana vashandi vanosimbisa nekusimudzira maturusi avo ekutsvagisa uye maalgorithms ekuwedzera chokwadi kusvika pamusoro pe400% nechiyero chemutambo we90%.
Kushandisa ZoomInfo's puratifomu, kambani yako inogona kutsvagisa, kunanga, uye kusvika kune yakanakisa B2B tarisiro. ZoomInfo's yekuvhara, huchokwadi, uye kudzika zvinozivikanwa seyakanakisa muindastiri. Mhinduro idzi dzinobatsira zvikwata zvako zvekutengesa uye zvekushambadzira kumhanyisa kutengesa nekudzikisa nguva yako yekuvhara nekuwedzera mari yako pese pese. Iyo platform inosanganisira:
ruzivo - tsanangura musika wako, tsvaga vatengi vakanaka, tevera mutengi chinangwa, uye ongorora mafoni, misangano, uye maemail kuti uongorore maitiro ako ekuvandudza.
kupana nduma - nyore kushandisa zvikumbiro zvemuno zvinofambisira mberi uye kubatana nevatengi pamatanho ako akakosha, kusanganisira email, foni, uye webhusaiti chat.
Orchestration -kurisa kugadzirwa kwekutengesa nekuita manyorerwo maitiro anoenderana neakakodzera ekunze uye emukati mafambiro emabasa.
ZoomInfo Platform Zvimiro Zvinosanganisira
Bata & Kambani Kutsvaga - Tsanangura misika, tsvaga vakanaka vatengi
Mutengi Chinangwa - Svika akagadzirira-ye-kutenga tarisiro
Kukurukurirana Intelligence - Ongorora kudyidzana kwese
Relationship Intelligence - Bata vanobatika uye kutaurirana
Data-se-a-Sevhisi -Shandisa yakabatana data zano
Sales kushandisa michina - Gadzirisa foni uye email kusvika
Webhusaiti Chat - Ziva uye nzira vatungamiriri vanokwanisa
Dhijitari Kushambadzira - Target vakagadzirirwa vateereri
Workflows - Kickstart kuenda-ku-kumusika zviitiko
Tungamira Kuvandudza - Wedzera data munguva chaiyo
Kubatanidzwa - Isa yakanakisa-mu-kirasi data mune akawanda ekushandisa anosanganisira Salesforce, MS Dynamics, uye Hubspot.
Kuvanzika kweData, Kujeka, uye Kutevedzera
ZoomInfo inonyatso kuenderana mukutora kwayo, kuchengetedza, uye kugadzirisa kweB2B data yekambani:
ZoomInfo ndeye ISO 27001 Certified, uye isu tinokoshesa kuvanzika kwedata uye kuchengetedzeka. Isu tinotevedzera mitemo yakasimba kuti tive nechokwadi chekuti data yatinounganidza inogara ichienderana nemutemo uchangoburwa. Isu takazvipawo pachedu kune EU-US uye Swiss-US Privacy Shield maitiro. Maitiro edu ekufambisa data anoenderana nezvinodiwa kubva kuEuropean Union, United Kingdom, Switzerland, pamwe neUnited States.
ZoomInfo inotungamira mune yemazuva ano yekuenda-kumusika software, data, uye hungwaru kumakambani anopfuura zviuru makumi maviri pasi rese.
Tanga Yako Yemahara ZoomInfo Muedzo
kuburitsa: Ndiri kushandisa yangu affiliate links mune ino chinyorwa.
Tags: b2bb2b mutengi chinangwab2b mutengi rwendob2b dhatab2b kuenzanisa datab2b tsvagiridzob2b tekinoroji datadata rebhizinesimutengi chinangwamutengi rwendodata rekambanikutaurirana njeredaasdata sevhisikubatanidzwa kwedatadigital advertisingfirmographic datahubspotiso 27001kutungamira kupfumisams dynamicsdata yekutsvagahukama huchenjerikutengesa kushandisa michinakutengesa kubatanidzwakutengesa ungwarukutengesa orchestrationkutengesa workflowssalesforcewebhusaiti chatzoominfo